Ndini ani? Pt. 2: toredzerwa — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
Nguva pfupi yapfuura Ndakaverenga Biography pakati Steve Jobs, muvambi uye newomuprofita shure Apple, guru boka munyika. Zvakanga dzinonakidza chaizvo kuverenga nokuti aiva shasha uye anopenga munhu panguva imwe chete. Upenyu hwake hwakanga kunakidza chaizvo kubva pakutanga kusvikira pakupedzisira.
Upenyu hwake hwakatanga apo murume nomukadzi vakasangana, aiva mwana asati varoorana, uye akamupa nokuda kuitwa. Izvi chaizvoizvo akanga simba rokuita paari, nokuti nguva dzose ainzwa akasiya, uye gare gare akasiya mumwe vana vake.
Asi dzinonakidza chikamu nyaya ndechokuti nomutsa uye mhuri rudo kubva California akazomurera. Vakatora chaizvo naye uye vakamuzvidza akafanana nomwanakomana wavo pachavo. Baba vake aiva injiniya uye akamupa kuonga zvakanaka akarigadzirira zvinhu. Uye vabereki vake kwazvo nezvibayiro kumupa mukana wose kuti ubudirire.
Zvino hombe chikamu kubudirira kwake aifanira kuita nevanhu akazomurera. Ivo zvakaumbwa kwaari. Kunyange nzira ivo dzaigarwa ake chero zvaidiwa ose vakabatsira mafungiro ake uye kutenda kuti aikwanisa kuita chinhu kuitika.
The chakanaka pamusoro wokugamuchirwa ndechokuti vanhu vasina basa mumwe kusarudza kuita basa. Vanoona mwana ane chokupa, uye ivo umupe zvose zvavanazvo. Mwana vanoshayiwa uye vanobvuma kuti nezvido izvozvo. Havasi anosungirwa kuzviita, asi ivo vanozviita kubva mutsa.
kuitwa naMwari vanhu vakaita semi neni uye zvakafanana munzira dzakawanda. Mwari haadi kuti tive nawo. Mwari haasi anosungirwa. Hatina chandingamupa. Tiri zvikuru vanoshayiwa, uye Mwari akapikira kuti nezvido izvozvo.
Asi mukuru musiyano ndechokuti Mwari haasi nemafungiro anongoitika vana vaanosangana. Mwari ari nemafungiro vapanduki vakanga vakagumburwa naye. Mwari ari nemafungiro matsotsi. Mwari ari nemafungiro vatadzi akanaka asi wakaputsika. Hapana tiitwe akafanana naMwari nokuti hapana rudo akafanana rwake.
Ngatitarisei John 1:10 kutanga nguva yedu pamwe chete.
"Iye akanga ari munyika, uye kunyange nyika yakaitwa kubudikidza naye, asi nyika haina kumuziva. Akauya kuna zvake, uye vanhu vokwake havana kumugamuchira. Asi ndiani akamugamuchira vose, vakatenda muzita rake, akavapa simba rokuti vave vana vaMwari, vakaberekwa, kwete neropa, kana nechido chenyama, kana nechido chemurume, asi Mwari. " (John 1:10-13)
ini. Akazvarwa Into Mhuri Yake
Mumwe rakajairika zvekungofungira munyika akafanana needu ndechokuti munhu wose ari mwana waMwari. Asi izvozvo handizvo zvinodzidziswa neBhaibheri. Bhaibheri rinodzidzisa kuti kana yatinozvarwa, tiri kwete vana vaMwari, asi vavengi vaMwari. Uye Bhaibheri rinodzidzisa chimwe chinhu chinotonyanya unotyisa, kuti yatinozvarwa vana vadhiyabhorosi. Izvi hazvirevi kuti tine nyanga, asi kuti tiri kutevera dhiyabhorosi uye kuti zvatinoita kutarisa zvakawanda sezvinoita Mwari wake pane kufanana kwakaita.
Zvino nhasi vanhu vakawanda vangati zvinoita pusa uye haanzwisisi. "Chokwadi isu tiri vana vaMwari,"Ivo vangati. tsime, ehe, isu tose naMwari uye kuti mupfungwa tiri vana vake, asi Bhaibheri rinoreva zvakawanda kana anotaura kuva vana vaMwari. Zviri zvakafanana musiyano kuva baba chaivo mwana wacho, asi kwete chaizvoizvo kuva muupenyu hwavo, zvichienzaniswa kuva baba munhu, vanovada, kutamba navo, nokutarisira zvavanoda.
Zvakasiyana musafanana kuberekwa mumhuri yenyu, izvo zvinowanzoitika vanonzi. Panofanira kuva neshanduko, patsva, mumwe kupinduka. Iwe hausi mumwe mwanakomana kana mwanasikana waMwari nokuti vabereki vako vari, kana nekuti shamwari dzako dziri, kana nekuti unoda kuva.
Kana tava kuva mwanakomana kana mwanasikana waMwari, tava kuti chakagamuchirwa mhuri yake. Asi sei kuti zvinoitika?
Kana uchizvitora kuva muKristu, Ndinoda kuzvibvunza nei. Ose zvino ipapo Ndichange mundege, uye ndichanwisawo kubvunza vanhu pedyo neni kana kwete vane ukama naMwari. Ivo kazhinji hungu, uye ndichanwisawo kuvabvunza kuti nei. Ndichaenda kuvabvunza chii vanotora kuti? Hazvinyaradzi achifamba ane mukana, kana kudzokorora munyengetero, kana kuverenga ndima?
Ndima isu chete kuverenga inoti zvakajeka runako, "Uyo akamugamuchira vose, vakatenda muzita rake, akavapa simba rokuti vave vana vaMwari…"Kuva mwana waMwari zvinoitika kana ukagamuchira Jesu. Uye sei ukagamuchira Jesu? Kuburikidza muzita rake.
Saka fungidzira Mwari sezvo ichi philanthropist akapfuma anopa kutora munhu wose chete ari panyika sezvo mwana wake. Uye chinhu bedzi zvaanotirayira kuti iwe kugamuchira mwanakomana wake nokutenda. Uye uri mumhuri.
Zvino tinocherechedza haana kungoti "vanotenda padzidziso yake." Anoti "vanotenda muzita rake."Pane guru chaizvo musiyano pakati nokutenda kudzidzisa munhu wacho uye kuvimba chaiko munhu. John ari kuti kugamuchira Jesu anovimba wacho-nokutenda muzita rake, uye zvose wakazviratidza kuti.
Saka shamwari, Ndinoda kuti muzive kuti hazvina kukwana kuti kutaura, "Ndinotenda dzimwe dzidziso dzaJesu, Ndinotenda tinofanira kudanana, Ndinotenda tinofanira kuenda kuchechi. "Johani akati pamakamugamuchira kunoreva kudavira muzita rake! Uchivimba Jesu. All kwaJesu.
Pakupedzisira, pane mhando mbiri vanhu kana totaura Jesu: Avo vanoramba naye nokuti vanoda rima uye vanotenda muzita rake.
“Ndakauya panyika sechiedza, zvekuti ani naani anotenda kwandiri arege kugara murima.” (John 12:46)
Chii Chinonzi Kutenda Kwechokwadi?
Dzimwe nguva tinofunga kuti kutenda uchabvumirana zvimwe zvinhu nezvaJesu. Ndinoziva kuti zvandaifunga. Asi rutendo chaizvoizvo tichivimba naye. Zviri kuziva chokwadi pamusoro iye ndiani uye zvaakaita, vachibvumirana mashoko iwayo, uye tichivimba navo-Betting hwako upenyu pamusoro pavo.
Wati Bet hwako izvi? Imwi achida kukanda zvose kure kuziva Kristu?
Unoona iye anotiudza zvishoma pamusoro zvazvinoreva kuva mwana waMwari, kurondedzera kwavari sevaya "vakaberekwa, kwete neropa, kana nechido chenyama, kana nechido chemurume, asi Mwari. "
Ari achiti kana tave vana vaMwari, tinofanira patsva. Izvi zvinoreva tiri kuitwa vatsva. Hwedu hwekare kuzviremekedza anofa. nguva yokutanga isu takaberekwa tiri havana kodzero, saka tinofanira kuzvarwa patsva.
John anoda kuti tizive kuti uku kusununguka akasiyana pane vedu vokutanga. Anopa qualifiers akawanda nechokwadi tinonzwisisa kuti. "Kwete ropa" rokuregerera anoda kuziva kuti izvi hazvina chokuita dzinongoitika zvizvarwa kana dzinza. "Kwete nyama" rokuregerera anoda kuziva hazvina kutangwa nevanhu chido chokurara. "Kana kuda murume" rokuregerera anoda kuziva kuti kuberekwa iyi haina anosarudza murume. kuberekwa patsva Uyu ndiye Mwari!
Patsva haisi mashoko kuti vanhu vakauya naye. Zviri yakatekeshera avo kunge vakavimba Kristu. Uye zvechokwadi kuti zvinhu zvose. Mwari kunokupa mwoyo mutsva, uyewo maziso kumuona, uye mweya wake unogara mamuri. Uri hachizi itsva chisikwa.
Nokufungidzira kuti hauzokwanisi kuwana zvekare kuti chivi ndiko hunonyengera kubvuma. Uri chisikwa chitsva patsva mumhuri yaMwari.
Chinhu chitsva chakaitika. Hausi kufanana vose zvakare, saka rega kuedza kufanana navo. Makambonzwa akabatana chikwata chitsva zvinangwa zvitsva. Tinewo kuziva kuti vane patsva, tanga unobvumidza mumhuri. Saka une nhengo dzemhuri, Hama nehanzvadzi mukutenda. kuvada. kuvakurudzira. Tiri pano kuti tibatsirane vanotevera Jesu.
II. Kuonekwa Sousiri Mwanakomana Wake
Kana mhuri adopts munhu, vanoenda zvakawanda kuti tive nechokwadi mwana wokurera haasi sokuti vari mwana wokurera. Havadi kuti vanzwe akasiyana uye kusagadzikana kana kufanana hadzisi. Panzvimbo vanoda kuvabata kufanana nevamwe vana vavo. Saizvozvowo, apo Mwari adopts isu se vake nevanasikana, atibate kufanana wake akaberekwa ari mumwe oga mwanakomana, Jesu.
WAKAMBONZWA mumwe munhu nezvazvo kuvimba mari mwana? Uyu munhu ane vabereki vari vapfumi, uye wakarurama chokuti ivo vakaberekerwa, zvavari ikozvino vakapfuma zvakare. Saka vanhu vanogumbuka nazvo, nokuti munhu wose aifanira kushanda nesimba kuti zvinhu zvavanazvo. Pamwe vanonakidzwa musha wavo uye zvakamunakira dzavo, asi vaifanira kushanda upenyu hwavo hwese. Pane rimwe divi, mupfumi mbudzana iyi kumbowana kushanda pazuva hwake asi ari kuita nani kupfuura vose. Ane zvose zvakanakira pasina kuita chero basa.
mumudzimu kutaura, tiri chivimbo mari vacheche. Just pachisikirwo yokuti tanga patsva mumhuri yaMwari, isu kuwana pfuma yezvokunamata. Isu Ndararama zvinopesana nemurairo yake, uye takave kuteerera, asi kana tikaisa kutenda kwedu muna Kristu isu kuwana zvose zvazvakanakira Jesu akagamuchira. Zvose basa naJesu ari kune kwatiri.
Ngatimbotaura pamusoro zvishoma izvozvo.
"Nokuda kwedu iye akamuita kuti ave chivi uyo akanga asina chivi, kuti isu tive kururama kwaMwari maari. " (2 Corinthians 5:21)
Jesu dzava nzvimbo nesu. Aiitirwa akafanana nesu, uye isu kunorapwa akafanana naye. Hakuzati zvinoshamisa? Kana uri vakagamuchirwa naMwari, uri kuona vakarurama maari-kwete somunhu tsvina, mutadzi maturo, asi vakarurama.
Zvakafanana munhu dzava kunze pakuongororwa. Tinowana mashoko A + kunyange zvazvo isu vakakundikana, uye Jesu anotambura chirango vachitadza.
Ndinoziva kuti dzimwe nguva kana handina kumbovapo muShoko nzira ndinofanira kuva, kana kana handina kuudza Gospel nevamwe vakaita ndive, Ini vanotanga kunzwa sezvakaita Mwari anopenga kwandiri. Zvino kuti ndisaramba kunyengetera, nokuti ndinonzwa sokuti haadi kunzwa kubva kwandiri. Munguva idzodzo zviri zvinobatsira yeuka kuti kana kushandisa neni, akandipa kururama kwaJesu.
Saka hazvina kupenga kwandiri zvakare; anofara neni muna Kristu. chivi changu zvinomutambudza, asi kuremara yangu mhuri yake haambochinji. Handina kuita zvinodiwa kuwana ikoko, uye hapana ndinogona kuita achandivakira kubvisa. Ini chete kuramba kuvimba uye nokureurura.
Izvi ini anosunungura muuranda kuedza kufadza vamwe vanhu vose nguva. Ini chairo kuti ndide wose kufunga zvikuru kwandiri. Uye chinhu kunondibatsira zvikuru kuyeuka kuti handina kuda kufarirwa yavo, nekuti Ndatova waMwari. Ndiri vatova rakanaka naye. Ndine zvose kufarirwa Ndichakupfuurai nokusingaperi tinoda
Zviri mujeri kurarama upenyu hwako hwakavakirwa chii vamwe vanhu vanofunga. Mwari anofunga zvikuru kwamuri muna Kristu, saka ngachive zvakakwana. Une zvose kufarirwa zvauchasangana nokusingaperi vanoda.
2. Hupenyu husingaperi
Takaona vaiwana rufu rwusingaperi, asi muna Kristu isu kuwana kurarama nokusingaperi naMwari. Tinowana zvakawanda upenyu-upenyu zvazvinofanira kuti akararama. Tinowana kurarama mukunamata raMambo akakwana nokusingaperi.
Izvi upenyu haisi zvose tine. Nei tichifanira kurarama seizvi? Tikasateerera zvinhu zvinokosha nokusingaperi uye nditevere zvinhu zvinonakidza zvino. asi nei? Haizi yakanakisisa tinowana. Iyi ndiyo nguva tine panyika ino vakudze Mwari kusvikira tiri pamwe naye kudenga.
Kana tikafunga izvi zvose isu kuwana tinofanira kuita zvose zvatinogona kuti chete tichinakidzwa zvedu. Asi kana tinoziva ichi kunongova ratidzo tinogona kupedza nguva yedu bhizimisi kwedu mukusingaperi.
3. sababa Love & Care
Ndinoda mwanakomana wangu zvikuru. Uye ndinoda haangamubatsiri. Mwari anotida uye achatipa zvachose chero zvakanaka kwatiri. Saka yeuka kana pane chinhu iwe usina izvozvi, hazvisi nokuti Mwari haasi kukwanisa kuripa. Zviri nokuti hazvina kunaka kuti imi.
Humwe uchapupu chokuti tiri sevanhu vanakomana vaMwari wechokwadi ndechokuti hatikwanisi kuparadzaniswa nerudo rwake. Isu takanga takabatana Jesu, Jesu akauya kwatiri kuna Baba. Nekuti tiri muna Jesu tinogona kumbobvira kuparadzaniswa naMwari.
mubvunzo: Saka ndiani chingaparadzanisa vana vaMwari kubva kwaari? mhinduro: Hapana chingaparadzanisa vana vaMwari kubva murudo rwake.
"Nokuti ndine chokwadi kuti rufu kana upenyu, kana ngirozi kana vabati, kana zvinhu zvazvino, kana zvinhu zvinouya, kana masimba, kana kukwirira kana kudzika, kana chimwe chinhuwo zvacho pazvisikwa zvose, achava kutiparadzanisa norudo rwaMwari rwuri muna Kristu Jesu Ishe wedu. " (Romans 8:38-39)
Hapana zvose Creation dzinogona norudo rwaMwari muna Kristu. Tiri vanakomana vake nevanasikana vake.
Pawaiva mbudzana, wakambonzwa mumwe munhu kukupa chinhu, ipapo kuedza kutora kuidzosera? Hanzvadzi yangu aisiita ichi neni. Aizova chinhu kuti aisada chaizvoizvo, uye ipapo iye aizopa kwandiri. Zvaiva tsvina kwaari. Saka ndingazoenda naro, nyora zita rangu pamusoro payo, kunakidzwa-kuti ndechangu. Zvakanaka zvino ndine naro ndiri chaizvoizvo yokuzomboiona, uye ikozvino iye anotarira ini yokuzomboiona uye iye anoda kuti shure. hu? Zvakanaka nepo ndisati ndisina hunokosha payo, zvino ndinoita. Ndechangu. Ini akanyora zita rangu pamusoro payo uye mawana panze kunonakidza nzira kutamba nayo. Zvakafanana Mwari. Zvino kuti tiri ake, iye isu anoti. Anoti, "Mine!"Hapana munhu anogona chichitibvuta kure naye uye norudo rwake.
Tinofanira kuyeuka izvi kana tikaenda kuburikidza dzakaoma. Hapana dzedu dzakaoma zvinogona kutiparadzanisa norudo rwaMwari. chokwadi, dzimwe nguva idzodzo dzakaoma uchapupu yokuti tiri vana vaMwari.
Mwari haasi chete kutipa zvinhu, asi anotipa pachake. Kana tikamurega kuenda pashure zvepabonde kuzadzika, tiri kusiya chaicho kunotsvaka Kunyepa. Unogona kusangana naMwari uye kunzwa kubva kwaari zuva nezuva shoko rake. Achateerera minyengetero yako uye ovapindura. Kana ukaswedera pedyo naye, iye achaswedera pedyo nemi.
III. Maererano neMwanakomana wake
Haana kusiya kupi tiri. Anoita kuti uwane saIye. Saka Haangopomeri kutiitira saJesu, asi iye anoita kuti tive saJesu.
Takataura pamusoro kuitwa nomufananidzo waMwari uye kuputswa. Eya Jesu ndiye mufananidzo waMwari akakwana, uye Mwari anoenderana isu nomufananidzo wake nokuita isu saJesu. Tinofanira kutanga kutarisa akafanana tiri mumhuri.
Takataura pamusoro mhando kutenda ndiyo achida kusiya zvose uye bheji zvose Jesu. Apo Mwari adopts isu, haana kutisiya kupi tiri.
Ndaitaura vamwe vadzidzi rimwe rezuva nokutenda muna Jesu, uye mumwe munhu ati, "Ndinotenda, asi ndichiri kuda kuti unakirwe dzimwe nguva. Ndicho chikonzero handina nguva dzose kufanana kuva kumativi vaKristu. "Panogona kuva zvimwe zvinhu munhu anotenda, asi nokutenda muBhaibheri anoshevedza ndiwo mose. Zvinochinja nzira munotarisira chivi chenyu. Imi pazviri.
Teerera zvinotaurwa Pauro anoti:
"Hamuzivi here kuti vasakarurama havagari nhaka youmambo hwaMwari? Musanyengerwa; kana mhombwe, kana vanonamata zvidhori, kana mhombwe, kana varume vanoita ungochani, kana mbavha, kana vanokara, kana zvidhakwa, kana vanotuka, kana makororo havazogari nhaka youmambo hwaMwari. Uye vakadaro vaiva vamwe venyu. Asi makashambidzwa, mukaitwa vatsvene, makaruramiswa muzita raIshe Jesu Kristu, uye noMweya waMwari wedu. " (1 Corinthians 6:9-11)
Zvinhu zviri zvatoitika. Hatisi kunorondedzerwa zvinhu zvakare.
Waizoitei kana uchiona mwana achiudza mubereki wake zvokuita? Kukambaira dzakapoteredza imba achirayira vabereki vake kumativi? Iwe vaizofunga akanga sebenzi! Sei? Nekuti ndivo vabereki, asi ivo vari kuita sezvinoita mwana. It's Zvinosuruvarisa apo vanhu vane mamwe simba uye ropafadzo asi vanoramba kufamba mazviri. Zviri kunyange crazier muKristu kurarama chivi. Une simba pamusoro chivi uye unofanira apiwa ropafadzo kufamba rusununguko. Nei ukasateerera kuti simba uye kufamba muuranda?
SevaKristu, Mwari akatotora akatisika vatsvene. Zvino tiri kuedza kuita upenyu hwedu kuratidza ani tiri muna Kristu mazuva ose. Kana uri Kristu iwe hausi murevi wenhema. Hausi munhu ngochani. Hausi mbavha. Uri mutsvene. Kuti zvinhu haana simba pamusoro penyu zvakare.
Handizivi kuti chii vanhu vari kutambura vari pano nhasi, asi zvakakosha kunzwisisa kuti chinzvimbo shanduko chaitika kana uri Kristu. Ndinoyeuka mumwe mwaka muupenyu hwangu hwechiKristu kana ndakanga dzabatwa rakaipisisa kutenderera chivi. Uye ndakanzwa sokuti ndakanga varanda chivi changu. Uye chikamu chikuru kukura wangu kunzwisisa chokwadi ichi: kuti handina kutadza. Ndanga vasunungurwa kare muuranda
Chii Mwari Ane Hanya Most About
Chinhu chikuru Mwari ari kuita muupenyu hwako kuchiita imi vatsvene. Kupfuura iye kunetseka kunyaradzwa kwenyu, iye kunetseka kwako utsvene. In Hebrews 12, munyori anotaura pamusoro chirango muupenyu hwedu. Dzimwe nguva upenyu chichakuvadza. Asi zviri pachena kuti kana tikaenda kuburikidza oma nguva, hazvirevi Mwari haatidi. Chaizvoizvo anotida nokutipa oma nguva. Izvi shoko chirango iri kushandiswa rinoreva nokudzidziswa. Mwari ari kudzidzisa isu uye kuita isu saJesu. Anogumisa isu vatsvene.
Kwaizova kusava norudo naMwari haana kudzidzisa isu uye kuti tive vatsvene. Zvaizoreva kuti hatizi vana vake. Dzimwe nguva kunyange kanoita kuranga kwedu nzira nemhaka yechivi. Kana ukatadza, uye varipo chinosemesa migumisiro, regai kutora kuti sezvo zvadzo madimbu. Unofanira kufunga kuti Mwari ari pakuranga iwe. Anonzwira iwe chii chivi chinounza, uye iye ari kuumba iwe kuti uve zvakawanda sezvinoita Kristu. Zvakafanana tiri scrawny, uye miedzo tive Buff. Jesu akakwana pakunamata buffness, uye Mwari anoda kuti isu akafanana naye.
Pakupedzisira iri basa raMwari. Anoita izvozvo kuburikidza yedu nesimba, asi kana uri muna Kristu anogona uye achazviita. Saka regai tizvidye mwoyo pachako. Unganzwa sokuti haukwanisi kuchinja pachako, uye kuti ichokwadi. Enda panzvimbo apo Mwari akavimbisa iye zvichachinja iwe.
Kana uri muKristu, zvakakosha kuziva ani ndimi uye chii zvipikirwa zvaMwari here. Mave vakagamuchirwa. Iwe uri mwanakomana kana mwanasikana waMwari.
mwanakomana wangu awana zvizhinji makomborero pakuva mwanakomana wangu. Ini kumutarisira, kugovera iye, chokuti iye zvokudya. Avo ropafadzo iyoyo tikasadziwana kune imwewo mwana kumativi. Asi hazvirevi hamugoni wokurera.
The Gospel ndicho oga uye yemubatanidzwa mashoko munyika. Zvikomborero izvi chete kuenda vamwe, asi zvinowanikwa zvose. Vimba Kristu. Mwari uchatevedzera iwe. Achaisa zvinhu awaisambova vakarumbidzwa-pakutanga ukama naye iwe.
1. Chii musiyano here kuti kana tiri vana vaMwari?
2. Aigadzira kusiyana vanofanira vanhu yakandipoteredza kuona kana ndiri mumhuri yaMwari?
3. Ndezvipi chaizvo imi zvikuru nezvekuva mwana waMwari?
4. Sei chokwadi kuti waita asunungurwa pachivi kushandura nzira imi tichikurire?
5. Ko basa Shoko raMwari kutamba kuva saJesu?
6. Unoitei kana usiri kukura akafanana unofanira kuva?